Ucwaningo lwe-2020 flu shot: Ngubani (futhi ongekho) othola umkhuhlane - Izindaba | Julayi 2021
Imfundo Yezempilo Izindaba, Wellness Inkampani, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izindaba Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa Cindezela Izidakamizwa Vs. Umngani Inkampani Umphakathi Inkampani, Izindaba Izindaba Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Umphakathi, Inkampani
Main >> Izindaba >> Ucwaningo lwethu lwe-2020 flu flu luveza ukuthi ngubani (futhi ongekho) othola umkhuhlane nokuthi kungani
Ucwaningo lwethu lwe-2020 flu flu luveza ukuthi ngubani (futhi ongekho) othola umkhuhlane nokuthi kungani
Isikhathi somkhuhlane siyeza, futhi abantu babonakala behlala phambili kwejika-noma okungenani bezama. Ngokuvumelana ne Idatha ye-SingleCare kadokotela , Ukufunwa komkhuhlane kudutshulwe ngasekupheleni kukaJulayi 2020 (cishe izinyanga ezintathu ngaphambi kwenkathi yomkhuhlane) kufana nesidingo esiphakeme esasibona ngonyaka odlule kusukela ngoSepthemba kuya ku-Okthoba. Kube nokunyuka okungu-1,666% kwesidingo sokugomela umkhuhlane kusukela ngo-Agasti 2020 uma kuqhathaniswa no-Agasti 2019.
Izikhulu zezempilo zomphakathi zikhuthaza abaseMelika ukuthi bathole imikhuhlane yabo, besho lokho ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane phakathi kuka-2020-21 kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili . Noma kunjalo, abantu abaningi bayangabaza ukusebenza komuthi wokugomela umkhuhlane futhi bayakungabaza ukuphepha kwawo, ikakhulukazi phakathi kobhadane lwe-coronavirus. Ucwaningo lwethu lomkhuhlane lubandakanya abantu baseMelika abangu-1,500 ukulandelela lezi zitayela zokudutshulwa komkhuhlane futhi bathole ukuthi kungani abantu bekhetha ukugoma (noma kungani bengekho).
Ama-58% asevele etholile noma ahlela ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane kulo nyaka
Abangu-16% bakholelwa ukuthi umuthi wokugomela umkhuhlane uzovikela i-COVID-19
Ama-60% wabaphenduli abanezingane asevele bathole noma bahlela ukugomela izingane zabo kulo nyaka
Ama-52% ngokuvamile athola umuthi wokugomela umkhuhlane
U-47% uthole umuthi wokugomela umkhuhlane ngonyaka odlule
Ama-38% akholelwa ukuthi umuthi wokugomela umkhuhlane awusebenzi
Ama-49% akhathazekile ngemiphumela emibi yomkhuhlane
Ama-59% awakaze athole impendulo yomuthi wokugoma
Imiphumela emibi yokugoma ivame ukubikwa kwabesifazane kunabesilisa
Amahhovisi odokotela namakhemisi kubikwa ukuthi yizindawo ezithandwa kakhulu ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane
Ama-59% abika ukuthi umshwalense wabo wezempilo uhlanganisa izindleko ezigcwele zomuthi wokugomela umkhuhlane
Ucwaningo lwethu lokudutshulwa kwemikhuhlane luthole ukuthi iningi labaphendulile lihlela ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane waminyaka yonke kulo nyaka noma selivele ligonyiwe:
U-13% usuvele utholile umuthi wokugomela umkhuhlane kulo nyaka
U-11% usuvele usuthole umkhuhlane
U-2% usuvele utholile umuthi wokugomela umkhuhlane wamakhala
U-45% uhlela ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane kulo nyaka
U-42% uhlela ukuthola umkhuhlane kulo nyaka
U-3% uhlela ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane wamakhalafu kulo nyaka
Ama-42% awahleleli ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane kulo nyaka
Noma kunjalo, cishe isigamu sabaphenduli abahleleli ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane kulo nyaka. Cishe ingxenye yesithathu (29%) yabaphenduli abaneminyaka engama-65 noma ngaphezulu kubikwa ukuthi abahleleli ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane waminyaka yonke — yize bebhekwa njengeqembu elineminyaka yobungozi obukhulu ezinkingeni ezihlobene nomkhuhlane.
I-spike ekugomeni kokuqala komkhuhlane kungenzeka ukuthi ingumphumela wobhadane lwe-coronavirus. Ucwaningo lwethu lomkhuhlane luthole ukuthi u-16% wabaphenduli bakholelwa ukuthi umuthi wokugomela umkhuhlane uzosiza ukuvikela i-COVID-19. Ngokwengeziwe, cishe ikota (24%) yabaphenduli asebevele benomkhuhlane odutshulwe kulo nyaka bacabanga ukuthi kuzovimbela i-COVID-19.
zingaki advil ongazithatha ngosuku
Yize i- umkhuhlane shot kuthanda hhayi vimbela i-COVID-19 , kuzovimbela umkhuhlane, ongaxegisa amasosha omzimba futhi okungenza ukuthi umuntu athinteke kalula ngokuthola i-coronavirus noma ukuthuthukisa izinkinga ze-coronavirus.
[Umkhuhlane] usiza ukuvimbela umkhuhlane kuphela, kusho I-Corey Fish , MD, udokotela wezingane kanye nesikhulu sezokwelapha eBrave Care ePortland, e-Oregon. I-COVID-19 ayiwona umkhuhlane, futhi besingeke silindele ukuthi umkhuhlane udubule i-COVID-19 njengoba besingalindele ukuthi ukudutshulwa kwe-tetanus ukuvimbela inyumoniya. Kodwa-ke, uma uthola i-COVID-19 nomkhuhlane, kunengqondo ukucabanga ukuthi lokhu kuzoba kubi kakhulu noma kukugulise kune-COVID-19 kuphela. Ngakho-ke, ukwenza konke okusemandleni ukuvikela ezinye izifo ezinemithi yokugoma kuzosiza ukunciphisa ubungozi bokutheleleka kwesibili noma ukutheleleka okuhlangana nge-COVID-19.
ICDC ibike ukuthi ukugonyelwa umkhuhlane ezinganeni (ezineminyaka eyisithupha kuya kwengu-17 ubudala) ku-2018-2019 kwaba 63% . Lokhu kube wukwanda uma kuqhathaniswa nenkathi yomkhuhlane ka-2017-2018 lapho 58% yezingane zithole umuthi wokugomela umkhuhlane. Ucwaningo lwethu luthole nokuthi abesifazane abaningi (16%) kunabesilisa (11%) babike ukuthi izingane zabo zizokwenza njalo hhayi thola umuthi wokugomela umkhuhlane kulo nyaka.
U-18% wabazali ubike ukuthi izingane zabo sezivele zithole umuthi wokugomela umkhuhlane kulo nyaka
Kubikwa ukuthi u-42% wabazali uhlela ukutholela izingane zabo umuthi wokugomela umkhuhlane kulo nyaka
U-40% wabazali ubike ukuthi izingane zabo ngeke zithole umuthi wokugomela umkhuhlane kulo nyaka
I- Ikomidi Elilulekayo Lemikhuba Yokugoma uncoma ukuthi wonke umuntu onezinyanga eziyisithupha noma ngaphezulu kufanele athole umuthi wokugomela umkhuhlane waminyaka yonke. Uma indawo noma amahora wehhovisi lodokotela wezingane wengane yakho kuphazamisa futhi kukuvimbela ekugomeleni izingane zakho, uMnyango Wezempilo Nemisebenzi Yabantu e-U.S. Kamuva nje osokhemisi abagunyaziwe ukuba baphathe imigomo yezingane .
Ngenhlanhla, lokhu kuphakeme kunomhlambi womkhuhlane, okungukuthi 33% kuya ku-44% . Ukuzivikela komhlambi (noma ukuvikelwa komphakathi ezifweni ezithathelwanayo) kudalwa lapho inani elikhulu labantu ligonyiwe. Ngamafuphi, lapho abantu abaningi begonyiwe, abantu bavikeleka kangcono njengoba ukusabalala kwesifo kuyehla noma kuyeka.
ICenters for Disease Control and Prevention (CDC) ibike ukuthi ukugonyelwa umkhuhlane kubantu abadala base-U.S. Kuphela 37% ngo-2017-2018 -okwehla ngo-6% uma kuqhathaniswa nesikhathi sangaphambilini somkhuhlane. Noma kunjalo, i-CDC ilinganisela Ezine. Ezinhlanu% yabantu abadala bathole umuthi wokugomela umkhuhlane ngo-2018-2019. Ucwaningo lwethu lokudutshulwa komkhuhlane lubonise ukwanda kwamazinga wokugoma we-2019-2020:
U-47% wabika ukuthi bathole umuthi wokugomela umkhuhlane ngonyaka odlule
U-29% wabika ukuthi oshade naye noma umlingani wakhe uthole umuthi wokugomela umkhuhlane ngonyaka odlule
U-17% wabika ukuthi izingane zabo zithole umuthi wokugomela umkhuhlane ngonyaka odlule
Abangu-9% babike ukuthi abebehlala nabo bathola umuthi wokugomela umkhuhlane ngonyaka odlule
Ama-38% abike ukuthi indlu yawo ayitholanga umuthi wokugomela umkhuhlane ngonyaka odlule
Abangaphezu kwengxenye yesithathu bakholelwa ukuthi umuthi wokugomela umkhuhlane awusebenzi
Imiphumela yethu yocwaningo ikhombise ukuthi labo abangagonyelwa bangangabaza ukusebenza komuthi wokugomela umkhuhlane:
Ama-38% akholelwa ukuthi umuthi wokugomela umkhuhlane awusebenzi ekuvikeleni umkhuhlane
Abangu-25% kubikwa ukuthi bathole lo mkhuhlane ngonyaka ofanayo bathola umuthi wokugomela umkhuhlane
Ngokwengeziwe, kulabo abavame ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane, abayi-7% babike ukuthi bayawuthola hhayi hlela ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane kulo nyaka. Lapho bebuzwa ukuthi kungani bengatholi umkhuhlane, abaphenduli babike ukukhathazeka okulandelayo:
bangaki abantu ababulawa ngumkhuhlane
Ukungakholelwa ukuthi umuthi wokugomela umkhuhlane uyasebenza
Ukuthola umkhuhlane emkhuhlaneni kudutshulwe
Ukugula noma ngabe ugonyiwe
Ukuba sengozini kakhulu yomkhuhlane ngemuva kokugoma
Ukuba sengozini enkulu ye-COVID-19 ngemuva kokugoma
Ukugula ngenxa yokugonywa nokuphoqeleka ukuthi uyeke ukusebenzela ukwahlukaniswa
Ukwesaba ubuthi obunobuthi obuvela ekugomeni
Ukungazi noma ukwethemba izithako zomuthi wokugomela umkhuhlane
Ngokwe-CDC, umuthi wokugomela umkhuhlane wehlisa ingozi yomkhuhlane ngokuthi 40% kuya ku-60% . Izinkinga ezinkulu ezihlobene nomkhuhlane azivamile, kuphela inani elilodwa kuya kwamabili emithamo eyizigidi ezi-1 umphumela wokungazwani nomuthi wokugoma, futhi ukufa okuhlobene nokugoma cishe 1 esigidini .
Kunezinye izinzuzo ezahlukahlukene zokuthola umuthi wokugoma, kufaka phakathi ukwenza umkhuhlane ube yisifo esibi kakhulu uma uthola umkhuhlane ngemuva kokudutshulwa kuqhathaniswa nokuthola umkhuhlane ngaphandle kokudutshulwa. Futhi, abantu abagonyiwe mancane amathuba okuthi bahlupheke noma bagcine esibhedlela uma bethola umkhuhlane, kusho uDkt Fish.
OKUSHIWO: Izibalo zokugoma kanye nokugoma
Cishe isigamu sikhathazekile ngemiphumela emibi yomkhuhlane
Ngo-2019, i-American Osteopathic Association yabika lokho Ezine. Ezinhlanu% yabantu baseMelika bakungabaza ukuphepha komuthi wokugoma (yize ucwaningo lwe-AOA lwalungacaciswanga umuthi wokugomela umkhuhlane). Imiphumela yethu yocwaningo lwemikhuhlane ibihambisana nalokho okutholakele, uma kungakhombisi ukwanda kokukhathazeka. Kwabangu-49% okubikwa ukuthi bakhathazekile, lena yimiphumela emibi abakhathazeke ngayo kakhulu, ngokusho kocwaningo lwethu:
Ubuhlungu bemisipha: 24%
Ukusabela okweqile: 18%
Ubuhlungu bekhanda: 17%
Ukucasuka kwesayithi lokujova: 15%
Kunzima ukuphefumula: 11%
Ukushaya kwenhliziyo okusheshayo: 10%
Ukuphelelwa amandla: 8%
Ukuthuthumela / ukuvunguza: 6%
Isifo se-Guillain-Barré: 6%
Ukulimala kwamahlombe okuhlobene nokuphathwa komuthi wokugoma (SIRVA): 5%
U-6% wabika okunye ukukhathazeka njengokuthola umkhuhlane emkhuhlaneni noma ukugula noma ngabe ugonyiwe
Kodwa-ke, iningi labaphendulile labika ukuthi alinampendulo emithini yokugomela umkhuhlane esikhathini esedlule
Sibuze abaphendulile ukuthi balinganise ukusabela kwabo emiphumeleni emibi ejwayelekile nemibi yemithi yokugomela imikhuhlane, iningi layo ebike ukuthi ayiphenduli.
Kubikwe ukusabela komkhuhlane
Akukho ukusabela Ukusabela okuncane Ukusabela okulingene Ukusabela okukhulu
Ukucasuka kwesayithi lokujova 65% 24% 8% 3%
Ubuhlungu bekhanda 78% 13% 6% 3%
Imfiva 77% 13% 7% 3%
Isicanucanu 81% 10% 6% 3%
Ubuhlungu bemisipha / ubuthakathaka 65% amashumi amabili nanye% 10% 4%
Ukuquleka 91% 4% 3% amaphesenti amabili
Kunzima ukuphefumula 90% 5% 3% amaphesenti amabili
Ukusabela okweqile 88% 5% 4% 3%
Ukulimala ehlombe okuhlobene nokuphathwa komuthi wokugoma (SIRVA) 91% 4% 3% amaphesenti amabili
Isifo se-Guillain-Barré 94% 3% 1% amaphesenti amabili
Ngokwengeziwe, iningi labaphendulile alikaze libe nemiphumela emibi noma ukusabela kunoma yimuphi umuthi wokugoma esikhathini esedlule:
Ama-59% abike ukuthi akukho ukusabela kunoma yimuphi umuthi wokugoma
Ama-27% abike ukusabela okuncane kunoma yimuphi umuthi wokugoma
Abangu-12% babike ukusabela okulingene kunoma yimuphi umuthi wokugoma
Abangu-2% babike ukusabela okunzima kunoma imuphi umuthi wokugoma
Imiphumela emibi kakhulu yomuthi wokugomela umkhuhlane kuba buhlungu, ukuba bomvu nokuvuvukala lapho kudutshulwe khona, kanye nomkhuhlane, imisipha ebuhlungu kanye nekhanda elincane, kusho uDkt. Lezi zimpawu zimnene futhi zincishiswa kangcono nge-compress epholile endaweni yokugoma noma ezinye ibuprofen .
UDkt Fish uphawula ukuthi izingane kufanele zithathe kuphela ibuprofen uma sebekhule ngokwanele.
OKUSHIWO: Amashadi wokulinganisa we-Ibuprofen
Imiphumela emibi ithinta abaphenduli besifazane ngaphezu kwabaphenduli besilisa
Imiphumela emibi yokugoma ibonakala ithinta abesifazane ngaphezu kwabesilisa. Abesifazane abaningi (47%) kunabesilisa (35%) babike ukuthi banezinga elithile (elincane, elilinganiselwe, elinzima) lokuphendula kunoma yimuphi umuthi wokugoma. Abesifazane babike ukuthi bakhathazeke kakhulu kunabesilisa mayelana nomjovo wesiza somjovo, ukuquleka, kanye nokungezwani komzimba nomuthi wokugomela umkhuhlane.
Ijenali Yezifo Ezithathelwanayo washicilela ucwaningo ngo-2014 olwaphetha imibiko ephakeme yokusabela okukubi kwasendaweni nokuhlelekile emithini yokugoma kwabesifazane kunabesilisa. Iphakamise ukuthi i-hormone yocansi yabesifazane i-estradiol ivuselela ukukhiqizwa kwama-antibody nokuphendula kumuthi wokugomela umkhuhlane ongasebenzi, kuyilapho i-testosterone kwabesilisa inganciphisa impendulo yomzimba ekugomeni komkhuhlane.
Ngemuva kwalokho, isifundo se-2019 ngu IJohns Hopkins University School of Health Public uthole ukuthi abesifazane abasebasha bavamise ukuba nempendulo eqinile yokuzivikela emithini yokugoma, kepha njengoba amazinga e-estrogen ancipha ngokuguga, kanjalo nempendulo yomzimba. Kodwa-ke, ucwaningo lwethu alutholanga ukuhlangana phakathi kwemiphumela emibi yokugoma kanye nobudala kwabesifazane.
OKUSHIWO: Kuphephile yini kwabesifazane abakhulelwe ukuthola umkhuhlane?
Amahhovisi odokotela namakhemisi yizindawo ezithandwa kakhulu ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane
Yize iSingleCare ibone i-spike kumuthi wokugomela umkhuhlane ugcwalisa kuleli hlobo, i- i-CDC uthi ukugoma ngoJulayi noma ngo-Agasti kusheshe kakhulu, ikakhulukazi kubantu abadala asebekhulile. Umkhuhlane udubula okungenani izinyanga eziyisithupha , kepha ukuvikelwa kwayo kwehla ngokuhamba kwesikhathi. Isikhathi esijwayelekile semikhuhlane siphakathi kuka-Okthoba noMashi, kepha umsebenzi womkhuhlane uvame ukuba phezulu phakathi kukaDisemba noFebhuwari. Ngoba kuthatha amasonto amabili ukwakha amasosha omzimba ngemuva kokuthola umuthi wokugomela umkhuhlane, kuyanconywa ukuthola umkhuhlane wakho udutshulwe ngaphambi kwalezi zinyanga eziphakeme. Ungathola umkhuhlane ezindaweni eziningi , kepha amahhovisi abahlinzeki bezempilo kanye namakhemisi aziwa kakhulu ngokusho kocwaningo lwethu lokugomela umkhuhlane:
Ihhovisi likadokotela: 37%
Umtholampilo wezempilo womphakathi: 4%
Ukuphuthumayo emtholampilo: 2%
Isitolo esikhulu: 2%
Umnyango wezempilo wombuso noma wendawo: 1%
Umtholampilo wezokuvakasha: 1%
Ama-5% abike ukuthi agonyelwe kwenye indawo, njengomtholampilo ongumahamba nendlwana emsebenzini
Ngaphandle komshuwalense, umkhuhlane ungabiza ngaphezu kwama- $ 50. Kodwa-ke, abaphenduli abaningi bocwaningo babike ukuthi uhlelo lwabo lomshuwalense wezempilo okungenani lumboze umuthi wokugomela umkhuhlane:
ishaya ngamandla inhliziyo yakho lapho ukhulelwe
Ama-65% abike umshwalense wabo wezempilo okungenani umboze umuthi wokugomela umkhuhlane
Ama-59% abike ukuthi imishwalense yabo yezempilo imboze ngokuphelele umuthi wokugomela umkhuhlane
U-6% wabika ukuthi umshwalense wabo wezempilo wawumboze kancane umuthi wokugomela umkhuhlane, futhi kwakudingeka bakhokhe ephaketheni bonke abanye
U-4% ubike ukuthi ukhokhele inani eligcwele ephaketheni lomuthi wokugomela umkhuhlane
U-1% ubike esebenzisa ikhadi lokonga noma isigqebhezana ukuthola isephulelo kumuthi wokugomela umkhuhlane
OKUSHIWO: Ngisithola kanjani isephulelo noma umkhuhlane wamahhala?
AbakwaSingleCare benze lolu cwaningo lokugomela umkhuhlane ku-inthanethi nge-AYTM ngo-Agasti 28, 2020. Lolu cwaningo lukazwelonke lubandakanya izakhamizi zase-United States zabantu abadala abaneminyaka yobudala eyi-18 +. Amasampula ababambiqhaza abalinganiselwa ekubalweni kwabantu ukufanisa abantu base-US ngokweminyaka, ubulili, kanye nesifunda sase-U.S.
Ukulawulwa kokuzalwa kwabesilisa: Izinketho zamanje kanye nokuqhamuka okusha
Ungayelapha kanjani i-perioral dermatitis ngokushesha ngama-antibiotic
ngithelelana kuze kube nini umkhuhlane
isikhathi esingakanani sokufukamela komkhuhlane
ukwelapha kanjani imvubelo ukutheleleka ngaphansi kwebele
uhlu lwamaphilisi wokulawulwa kokubeletha aphezulu
isikhathi esingakanani ngaphambi kocansi ukuthatha i-viagra
umfana angathola ukutheleleka ngemvubelo
ekwelapheni izifo zesilonda sesilisa phezu kwekhawunta